ရိုးသားမှု အရင်းခံပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ရိုးသားမှုဂုဏ်ပုဒ် ဒီလိုရိုးသားတဲ့ လူမျိုးတွေ ကြောင့်လည်း မြန်မာဆိုပြီး ဂုဏ်ယူရတာ ပေါ့လေ.. – Myanmar Update News
Up To Date | June 18, 2020 | Lifestyle, Local News | No Comments
ရိုးသားမှု အရင်းခံရှိပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ရိုးသားမှုဂုဏ်ပုဒ် ဒီလိုရိုးသားတဲ့ မြန်မာလူမျိုး တွေကြောင့်လည်း မြန်မာဆိုပြီး ဂုဏ်ယူရတာ ပေါ့လေ..
(မြန်မာတွေရဲ့ရိုးသားမှုဂုဏ်ပုဒ်) ဒီလိုရိုးသားတဲ့ သူတွေ ရှိနေသေးတာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ “ရိုးသားမှုတွေ ရှိနေခြင်းအတွက် ဝမ်း မြောက်ဂုဏ်ယူမိခြင်း”
မနေ့ကနံက်စောစော (၇)နာရီလောက်..ဖုန်းတစ်ခုဝင် လာသည်။ ကျွန်တော့ အကိုကြီးထံမှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအ ပြည့်နှင့် ဆက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ 8 Mile Hotel မှ ဆည်မြောင်းလမ်းရှိ Lucky Seven လ္ဘက်ရည် ဆိုင်ထိ ကျပ် ၁၅၀၀ နဲ့ Taxi ငှားပြီး နံက်စာလာစားကြ၏။
ပိုက်ဆံ ရှင်းတော့မှ ၎င်းတို့၏ ပိုက်ဆံအိတ်မတွေ့ ၍ စဉ်းစားကြည့်တော့ ခုန City Taxi ပေါ်မှာမေ့ကျန်ခဲ့လေပြီ။ Wallet ထဲတွင် $ 700 နှင့်ကျပ် ၁ သိန်းကျော်ပါသွားပြီး ငွေထက် အရေးကြီးသည့် ID Cards များပါသွားသဖြင့်
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်ရနိုင်မလဲ စဉ်းစားကြသည်။ “ရေအဆုံး ကုန်းတစ်ဝက်ပေါ့” Grab Taxi ဆိုရင် နောက် ကြောင်းလိုက်လို့ရနိုင်သေးသည်။ သူတို့တွေလည်း ၁၁ နာရီလေယာဉ်နဲ့ US ပြန်ကြမှာ ဖြစ်လို့ ID Card မရှိရင် အခက်အခဲတွေ ရှိလာနိုင်သည်။
ဒါ့ကြောင့် Lucky Seven ဆိုင်မှာ Contact message ထားပြီး 8 Mile Hotel မှာပြန်ပြီး F.O မှာလည်း Message ပေးခဲ့သည်။ Check out လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေရင်း မရီးဖြစ်သူမှ ဘုရားအာရုဏ်ပြု မေတ္တာပို့နေစဉ်အခန်းကို Receptionist ကလေး မစု မှလာပြော ပါတယ်။
F.O မှာ လူတယောက်လာပြီး ပိုက်ဆံအိတ် ကောက်ရလို့ လာမေးကြောင်း၊ သိရရခြင်း ဆင်းကြည့်တော့ ခုနငှားခဲ့တဲ့ Taxi Driver ကြီးဖြစ်နေတယ်။ သူလည်း နောက်စီးတဲ့ ခရီးသည်က နောက်ခန်းမှာ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခု ကောက်ရကြောင်း သူထံအပ်ပြီး လေဆိပ်မှာ ဆင်းသွားတယ်။
ဖွင့်ကြည့်တော့ ID Cards နဲ့ငွေတွေတွေ့တော့ ဘယ်လိုပြန်ပေး ရမလဲစဉ်းစားပြီး သူတို့ငှားစီးခဲ့တဲ့ Junction 8 ဖက်ပြန်မောင်း လာခဲ့တယ်။ ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်ပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ရိုးသားမှု အရင်းခံစိတ်နဲ့ လာရှာတာဖြစ် ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်တော့ အကိုလည်း မမျှော်လင့် ဘဲပိုက်ဆံအိတ် လက်ဝယ်ပြန်ရ၍ အံဩပြီးကြက်သေ သေနေစဉ် Taxi Driver ကြီးက ပြန်ထွက်သွား ခဲ့ပြီ။ သတိရရခြင်းလိုက်သွား ပြီး ဆုငွေ $100 ပေးတော့ငြင်းပါတယ်။
ရိုးသားမှုအတွက် ချီးမြှင့်တာကြောင့် လက်ခံဖို့ကို အ တင်းပေးမှယူပြီး သူမိသားစုမှာ ငွေအခက်အခဲ ကြုံနေရပေမယ့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ လာရှာပေးတာဖြစ် ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ရိုးသားမှု အရင်းခံ ကိုယ်ချင်းစာ စိတ်ဓာတ်ကောင်း တွေရှိနေသေးပါလား လို့တွေးမိရင်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အကယ်၍ နောက်ခရီးသည်က မရိုးသားခဲ့ရင် လည်းပြန်ရ စရာအကြောင်း မရှိသလို Taxi Driver ကြီး “ဦးအေးလွင်” မှ တားစီးတဲ.
ခရီးသည် တွေလက်မခံဘဲ အချိန်မှီလာပေးလို့သာ ကိုကြီး တို့ပြည်တော်ပြန် စိတ်ချမ်းသာခဲ့ ရတာမဟုတ်ပေလော! ရိုးသားမှု အရင်းခံရှိပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင် လေးစားဂါရဝ ထားလျှက်….
(Unicode version) ရိုးသားမှု အရငျးခံရှိပွီး ကိုယျခငျြးစာစိတျရှိတဲ့ မွနျမာတှရေဲ့ရိုးသားမှုဂုဏျပုဒျ ဒီလိုရိုးသားတဲ့ မွနျမာလူမြိုး တှကွေောငျ့လညျး မွနျမာဆိုပွီး ဂုဏျယူရတာ ပေါ့လေ..
(မွနျမာတှရေဲ့ရိုးသားမှုဂုဏျပုဒျ) ဒီလိုရိုးသားတဲ့ သူတှေ ရှိနသေေးတာ မွနျမာလူမြိုးတှေ အတှကျ ဂုဏျယူစရာပါ “ရိုးသားမှုတှေ ရှိနခွေငျးအတှကျ ဝမျး မွောကျဂုဏျယူမိခွငျး”
မနကေ့နံကျစောစော (၇)နာရီလောကျ..ဖုနျးတဈခုဝငျ လာသညျ။ ကြှနျတော့ အကိုကွီးထံမှ စိုးရိမျပူပနျမှုအ ပွညျ့နှငျ့ ဆကျလာခွငျး ဖွဈသညျ။ 8 Mile Hotel မှ ဆညျမွောငျးလမျးရှိ Lucky Seven လ်ဘကျရညျ ဆိုငျထိ ကပျြ ၁၅၀၀ နဲ့ Taxi ငှားပွီး နံကျစာလာစားကွ၏။
ပိုကျဆံ ရှငျးတော့မှ ၎င်းငျးတို့၏ ပိုကျဆံအိတျမတှေ့ ၍ စဉျးစားကွညျ့တော့ ခုန City Taxi ပျေါမှာမကေ့နျြခဲ့လပွေီ။ Wallet ထဲတှငျ $ 700 နှငျ့ကပျြ ၁ သိနျးကြျောပါသှားပွီး ငှထေကျ အရေးကွီးသညျ့ ID Cards မြားပါသှားသဖွငျ့
ဘယျလိုနညျးနဲ့ ပွနျရနိုငျမလဲ စဉျးစားကွသညျ။ “ရအေဆုံး ကုနျးတဈဝကျပေါ့” Grab Taxi ဆိုရငျ နောကျ ကွောငျးလိုကျလို့ရနိုငျသေးသညျ။ သူတို့တှလေညျး ၁၁ နာရီလယောဉျနဲ့ US ပွနျကွမှာ ဖွဈလို့ ID Card မရှိရငျ အခကျအခဲတှေ ရှိလာနိုငျသညျ။
ဒါ့ကွောငျ့ Lucky Seven ဆိုငျမှာ Contact message ထားပွီး 8 Mile Hotel မှာပွနျပွီး F.O မှာလညျး Message ပေးခဲ့သညျ။ Check out လုပျဖို့ ပွငျဆငျနရေငျး မရီးဖွဈသူမှ ဘုရားအာရုဏျပွု မတ်ေတာပို့နစေဉျအခနျးကို Receptionist ကလေး မစု မှလာပွော ပါတယျ။
F.O မှာ လူတယောကျလာပွီး ပိုကျဆံအိတျ ကောကျရလို့ လာမေးကွောငျး၊ သိရရခွငျး ဆငျးကွညျ့တော့ ခုနငှားခဲ့တဲ့ Taxi Driver ကွီးဖွဈနတေယျ။ သူလညျး နောကျစီးတဲ့ ခရီးသညျက နောကျခနျးမှာ ပိုကျဆံအိတျတဈခု ကောကျရကွောငျး သူထံအပျပွီး လဆေိပျမှာ ဆငျးသှားတယျ။
ဖှငျ့ကွညျ့တော့ ID Cards နဲ့ငှတှေတှေတေ့ော့ ဘယျလိုပွနျပေး ရမလဲစဉျးစားပွီး သူတို့ငှားစီးခဲ့တဲ့ Junction 8 ဖကျပွနျမောငျး လာခဲ့တယျ။ ပိုငျရှငျထံ ပွနျပေးသငျ့တယျ ဆိုတဲ့ရိုးသားမှု အရငျးခံစိတျနဲ့ လာရှာတာဖွဈ ကွောငျး ပွောပွပါတယျ။
ကြှနျတော့ အကိုလညျး မမြှျောလငျ့ ဘဲပိုကျဆံအိတျ လကျဝယျပွနျရ၍ အံဩပွီးကွကျသေ သနေစေဉျ Taxi Driver ကွီးက ပွနျထှကျသှား ခဲ့ပွီ။ သတိရရခွငျးလိုကျသှားပွီး ဆုငှေ $100 ပေးတော့ငွငျးပါတယျ။
ရိုးသားမှုအတှကျ ခြီးမွှငျ့တာကွောငျ့ လကျခံဖို့ကို အ တငျးပေးမှယူပွီး သူမိသားစုမှာ ငှအေခကျအခဲ ကွုံနရေပမေယျ့ ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ လာရှာပေးတာဖွဈ ကွောငျးပွောခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ မွနျမာလူမြိုးတှမှော ရိုးသားမှု အရငျးခံ ကိုယျခငျြးစာ စိတျဓာတျကောငျး တှရှေိနသေေးပါလား လို့တှေးမိရငျး ဝမျးသာမိပါတယျ။ အကယျ၍ နောကျခရီးသညျက မရိုးသားခဲ့ရငျ လညျးပွနျရ စရာအကွောငျး မရှိသလို Taxi Driver ကွီး “ဦးအေးလှငျ” မှ တားစီးတဲ့
ခရီးသညျ တှလေကျမခံဘဲ အခြိနျမှီလာပေးလို့သာ ကိုကွီး တို့ပွညျတျောပွနျ စိတျခမျြးသာခဲ့ ရတာမဟုတျပလေော! ရိုးသားမှု အရငျးခံရှိပွီး ကိုယျခငျြးစာစိတျ ရှိသူအားလုံးကို ကြေးဇူးတငျ လေးစားဂါရဝ ထားလြှကျ….Thet Lwin Toh
သမဝါယမဦးစီးဌာနက COVID-19 ရောဂါကြောင့် ရောင်းချရန် ခက်ခဲနေသည့် သီးနှံများဝယ်ယူပေးမည်ဟု ကုန်သွယ်မှုဌာနစု ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်မာအေးပြော